ဒီတပတ် English Learning: American Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ New Year နှစ်သစ်မှာအသုံးပြု လေ့ရှိတဲ့ Idiom အသုံးအနှုန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Turn overanew leaf, Start from scratch နဲ့ Back to square one တို့ကိုတင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Turn overanew leaf
Turn (လှန်လိုက်တာ)၊ over (တဖက်ကို)၊a(တခု) new (အသစ်)၊ leaf က အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးရှိပေမယ့် ဒီနေရာမှာ page ဆိုတဲ့ (စာရွက်၊ စာမျက်နှာ) ဖြစ်တော့ ၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ စာမျက်နှာသစ်ကိုလှန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးဟာ နှစ်သစ်မှာ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ကိုယ့်ရဲ့ အဆိုးအကောင်းကို ပြန်ပြောင်းသုံးသပ်ပြီး လာမယ့်နှစ်မှာတော့ ဘာတွေကိုဆောင်မယ်၊ ဘာတွေကိုတော့ဖြင့်ရှောင်မယ်ဆိုပြီး ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ဟောင်းရဲ့  အညစ်အကြေးတွေ၊ အမှားအယွင်းတွေ ၊ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာတွေကို ပြုပြင်မယ်ဆိုတဲ့ New Year Resolutions ဆိုတဲ့ နှစ်သစ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချလေ့ရှိရာကနေ ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမှာတော့ ရှိခဲ့တဲ့အကျင့်ဆိုးတွေ၊ မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကို ဖျောက်ပြီး ကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးမယ်၊ နိုင်ငံရေးမှာဆိုရင်လည်း သမိုင်းစာမျက်နှာသစ်ပြန်စမယ်ဆိုတဲ့ အသုံးနဲ့ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကလည်း ရှင်းပါတယ်။ စိတ်သစ်လူသစ်ဖြစ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
John told me he is going to turn overanew leaf this year. He will save money and also stop drinking. John က ဒီနှစ်မှာတော့သူ စိတ်သစ်လူသစ်အဖြစ်နှင့် ၊ ပိုက်ဆံစုမယ်၊ ပြီးတော့ အရက်လည်း မသောက်တော့ဘူးလို့ကျနော်ကိုပြောခဲ့တယ်။
(၂) Start from scratch
Start (စတင်တာ)၊ from (မှ)၊ scratch (ကုတ်ခြစ်တာ) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ကုတ်ခြစ်ရာကနေ စတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက အပြေးပြိုင်ပွဲက ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲ ၀င်အပြေးသမားတွေအနေနဲ့ တာမထွက်မီ ဒိုင်ရဲ့  သေနတ်ပစ်ဖောက်မှုကို စောင့်ရာမှာ ၊ တာထွက်တဲ့မျဉ်းပေါ်မှာ ပြေးဖို့ဟန်ပြင်နေတုန်း ကိုယ်စီးထားတဲ့ ဖိနပ်နဲ့ တာထွက်တဲ့နေရာရှိမြေကြီး ကိုပွတ်တိုက်ကုတ်ခြစ် အားယူရာကနေ ဒီအသုံး ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အပြေးပြိုင်ပွဲဟာ ဘယ်နှစ်မိုင်ဘဲရှိရှိ၊ စတဲ့နေရာကတော့ တာထွက်တဲ့ နေရာကတာအထွက်ဖြစ်သလို၊ အီဒီယံဆိုတဲ့သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကလည်း တစ်ကနေ ပြန်စတာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ လုပ်ရမယ့်ဟာ မှန်သမျှကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အစကနေ ပြန်လုပ်ရတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကိတ်မုန့်ဖုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်သင့်ပြင်ပြီးသား အထုပ်ကို ရေရောမွှေပြီးတော့ ဖုတ်မယ့်အစား ကိုယ်ဟာကိုယ် ဂျူံ၊ သိကြား၊ ကြက်ဥ၊ နို့ အစသဖြင့် အားလုံးရောပြီး အစကနေ ကိုယ်တိုင်လုပ်တာမျိုးကို Start from scratch လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်း အလားတူပါပဲ။ အောက်ခြေကနေ ပြန်စတာ၊ တစ်ကနေ ပြန်စတာ၊ သုညကနေ ပြန်စတာမျိုးနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Our boss started his business from scratch. He is smart so now he isamillionaire!
ကျနော်တို့ ဆရာသမားက သူ့ရဲ့  စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အောက်ခြေကနေ စခဲ့တာ။ သူက ဥာဏ်ထက်တော့ အခုတော့ သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်နေပြီ။
(၃) Back to square one
Back to (အနောက်ကို ပြန်သွားတာ)၊ square (လေးထောင့်အကွက်) one (နံပတ်တစ်) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ နံပါတ်တစ်လေးထောင့်အကွက်ဆီကို ပြန်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတဲ့ နောက်ကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ တခုကတော့ Snake and Ladder အပြင်းပြေ ကစားနည်းမျိုးဖြစ်တဲ့ မြွေနဲ့ လှေကားထစ်တွေ ဆွဲထားတဲ့ ကားချပ်ပေါ်မှာ ကစားသူတွေက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အရောင် ကော်ဒိုးပြားဝိုင်းတွေကိုသုံးပြီး Dice ဆိုတဲ့ အံစာတုံးကို ခွက်ထဲထည့် လှုပ်ပြီးနောက် ပစ်လိုက်တဲ့အခါ ကျတဲ့နံပါတ်အလိုက် ဒိုးကို လိုက်ရွှေ့ ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံ ကိုယ့်နံပါတ်က မြွေရှိရာကို ရောက်သွားတယ်ဆိုရင် မြွေကိုယ်ထည်အရှည်အလိုက်၊ ကိုယ်က အောက်ကိုပြန်ဆင်းရတာဖြစ်ပြီး၊ ပထမအကွက်ကနေ ပြန်ပြီးတော့ စရတာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကလည်း မြန်မာမှာ အဆုံးကနေ ပြန်စရတယ်၊ သုညကနေ ပြန်စရတယ်ဆိုတာနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Our initial plan was failure. So, it’s back to square one for our team.
ကျနော်တို့ ပထမ ရေးဆွဲတဲ့အစီအစဉ်က မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အဖွဲ့ ၊ တစ်ကနေ ပြန်စကြရတော့မယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ အစကနေပြန်စရတာကိုရည်ညွှန်းတဲ့ Idiom အသုံးတွေက Turn overanew leaf, Start from scratch နှင့် Back to square one တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။